I-China Isostatic Pressing Graphite Blocks yoMkhiqizi kanye noMphakeli | I-Jinglong
Isostatic Ukucindezela Umsizi Amabhulokhi
I-Isostatic Pressing Graphite wuhlobo olusha lwezinto ze-graphite ezakhiwa ngawo-1940 ngochungechunge lwezakhiwo ezinhle kakhulu. I-Isostatic Pressing Graphite inokumelana okuhle nokushisa. Kugesi we-inert, amandla ayo wokusebenza akhula ngokwanda kwezinga lokushisa, afinyelela inani eliphakeme cishe ku-2500 ℃ .Iqhathaniswa ne-graphite ejwayelekile, ukwakheka kwe-isostatic graphite kuhlangene kakhulu, kubucayi, futhi kuyalingana.
I-coefficient yokunwetshwa okushisayo iphansi kakhulu, ukumelana nokushaqeka kwayo okushisayo kuhle kakhulu, futhi isotropic yayo, ukumelana nokugqwala kwamakhemikhali kuqinile, okwamanje, kune-conductivity enhle yokushisa nokushisa nokusebenza kahle kwemishini. Isostatic Pressing Graphite Blocks ingasetshenziselwa i-EDM graphite electrode, ukwelashwa kwamanzi, i-electrode eqhubayo, i-anode cathode graphite block, i-electrolytic graphite electrode, nezinjongo zokuthambisa. I-graphite block yethu inezici zamanani aphezulu, ukumelana okuphansi, ukumelana ne-oxidation, ukumelana nokugqwala, ukumelana nokushisa okuphezulu, ukuqhuba okuhle, njll.
Ubungqingili obungcono: i-homogeneity engcono yezinto ezibonakalayo isho isikhathi eside sempilo nokulawulwa okuzinzile kokuqina kwezinto.
Ubukhulu obukhulu: singanikezela ngamabhuloki asikwele amakhulu njengama-2150 * 1290 * 500mm namabhulokhi ayindilinga amakhulu njengama-D1450 * 1200mm & D1100 * 1200mm. usayizi wokusanhlamvu 10um
Ubumsulwa Ephakeme: Lapho isicelo ikhasimende, singakwazi ukunikeza imikhiqizo ngokuqukethwe umlotha esingaphansi 20ppm / 30ppm. Ukuze semiconductor nolunye uhlelo lokusebenza ethize, okuqukethwe umlotha zingalawulwa esingaphansi 5ppm.
Ukuqhuba Okushisayo （100 ℃)
I-Coefficient Yokunwetshwa Kwe-Thermal (I-Indoor Tempreture -600 ℃)
Ekubunjweni okuqhubekayo, sintering, lokushisa eliphezulu ekubunjweni
Langaphambilini Izingxenye ze-graphite zesithando somshini
Olandelayo: Isostatic Ukucindezela Silicon Carbide Graphite Iziko: